Dowladda Mareykanka oo shirkii London ku sifeysay mid dib u cusbooneysiiyay rajada geeddi-socodka nabadda Somaliya. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Dowladda Mareykanka oo shirkii London ku sifeysay mid dib u cusbooneysiiyay rajada geeddi-socodka nabadda Somaliya.
Jim Mattis xoghayaha gaashandhigga Mareykanka ayaa wariyeyaasha u sheegay isagoo u duulayay magaalada Washinton inuu ku niyadsanyahay waxa ka soo baxay shirka London, kadib markii uu kulan gaar ah laa qaatay madaxweynaha Somalia.
“Mareykanka kaalin ayuu ka qaadanayaa taageerada ciribtirka kooxda sharwadayaasha ah ee Al-shabab” ayuu sheegay Matis. QM, midowga Africa, midowga Europe, oo lagu biiriyay dowladaha Carabta, Afrika iyo kuwa reer Europe ayuu hadalkiisa ku daray inay ka doodeen hannaanka hore loogu sii wadi karo.
Xoghaye, Mattis ayaa yiri, Somaliya waxay leedahay barnaamij dhaqaale iyo mid dowladeed oo ay mar kale cagaheeda dib isugu taageyso, taageerada caalamkana waa u muhiim hannaankaasi.
“Sidaas awgeed waxaan ka shaqeyneynaa, sida mustaqbalka uu u muuqanayo iyo waxa dowladaha ka go’an si loo helo qaab sax ah,” ayuu yiri Mattis. -“waxaa ku jirta dhinaca Amniga, sii wadida xoogaggeeda amaanka difaacyada ka dhanka ah Al-shabab, laakin sidoo kale waxaa qeyb ka ah barnaamij dib-u-heshiisiineed oo qaabeysan.
Hannaanka guud ee xaaladda Somaliya waa mid ay ka muuqato fursadii guusha. Ayuu sheegay Mattis.
“Waxaa jirta aragti dhab ahaaneed oo dib u cusbooneysiisay rajada, taasoo ku saleysan doorashada hoggaamiye u muuqda mid wanaagsan, haddii ay ahaan lahayd fahamka baahida amniga ciidan, sidoo kale dadaallada dhaqaalaha iyo dib-u-heshiisiinta oo la sii ambaqaado”. Ayuu yiri.
Dhinaca kale, mar uu ka hadlayay La-dagaallanka Argagixisada Mattis waxa uu amaanay howgalka nabad-ilaalinta midowga Africa ee Somaliya ee AMISOM, wuxuuna sheegay inay xoogaggu soo qabteen shaqo wanaagsan.
Dhageyso:-Puntland oo dacwad ku soo oogtay 18 Nin oo lagu eedeeyay burcad Baddeednimo